Triveni Online - Page2of 432 - News of Nepal
काठमाडौ । सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा भोली सार्वजनिक बिदा दिएको छ । घोडेजात्राका अवसरमा (भोली )शुक्रबार नेपाली सेनाले टुँडिखेलमा घोडा कुदाउने चलन रहकाले बिदा दिएको हो । चैत कृष्ण चतुर्दशीका दिन भूत, प्रेत र पिशाचले बालबालिकालमई दुख नदियोस् भनेर बुझाउने र बुझाउदा पनि नजानेलाई औँसीका दिन घोडाको टापले कुल्चिएर भगाउने परम्परा …
नायिका रेखा थापाले किन भनिन्, यो सेक्सिस्ट हो वा विप्लवमाथि पूर्वाग्रह
काठमाडौं, २१ चैत । नायिका रेखा थापा यतिबेला चलचित्र निर्माण र अभिनयभन्दा पनि अन्य क्षेत्रतिर क्रियाशील छिन् । हालै महिला क्रिकेट क्लबमा लगानी गरेकी रेखा फुर्सदको समय सामाजिक सञ्जालमा समसामयिक विषयमा टिप्पणी गरिरहन्छिन् । राप्रपा संयुक्तकी केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी रेखाले बुधबार फेसबुकमा लेखेको लामो स्टाटस अहिले चर्चामा छ । पछिल्लो …
सुनको मूल्य कति पुग्यो ? हेर्नुहोस्
नायिका पूजा चन्द तीन साताभन्दा बढी समय नेपाल बस्दा पनि धेरैले थाहा पाएनन्, उडिन् अमेरिका
काठमाडौं, २१ चैत । कुनै समयकी चर्चित नायिका पूजा चन्द यसपटक धेरै लामो समय नेपाल बसिन् । श्रीमान् राजु लामासँग उनी ९ मार्चका दिन नेपाल आएकी थिइन् । नेपाल आएपछि उनी पोखरा गइन् । दक्षिणकाली मन्दिर गइन् । एउटा म्युजिक भिडियोमा पनि देखिइन् । तर, धेरै मिडियाले पूजा चन्दबारे चासो …
प्रधानमन्त्रीको सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँगको बैठक सकियो, वैशाख १४ गते अन्तरप्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाउने
काठमाडौं, २१ चैत । प्रधानमन्त्री केपी ओली र सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबीच बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठक सकिएको छ । बैठक आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारीका विषयमा केन्द्रित थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले नीति कार्यक्रम र बजेटका विषयमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारका कार्यक्रम नदोहोरिउन् भनेर …
प्रेममा शारीरिक सम्बन्धले कति महत्व राख्छ ? यो आ-आफ्नो बुझाई र भोगाइमा निर्भर गर्ने कुरा हो । कतिले ठान्छन्, प्रेम शुद्ध प्रेम मात्र हुनुपर्छ । कतिले यसलाई रोमान्सको रुपमा लिन्छन् । प्रेमी पनि त कोही आदर्श हुन्छन्, कोही विन्दास । कोही संवेदनसिल हुन्छन्, कोही रोमान्टिक । हामी भन्छौं, प्रेममा शारीरिक …
प्रकृतिले मानिसलाई निकै अनमोल बस्तुहरु उपहारमा दिएको छ । त्यसमध्ये एक हो रुद्राक्ष । राशिका अनुसार महंगा रत्न किन्नु सबैको बसमा हुँदैन । तर रुद्राक्ष लगाउनु सहज विकल्प हो ।करियरलाई राम्रो बनाउन अलग अलग पेशामा जोडिएका मानिसका लागि अलग अलग रुद्राक्ष लगाउनु उत्तम भएको ज्योतिष शास्त्रको भनाइ छ । यहाँ …